Anyị nwalere Oral-B Genius X 20000N Black Edition, ezé ezé na ọgụgụ isi | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere Oral-B Genius X 20000N Black Edition, ezé nke ọgụgụ isi
Jordi Gimenez | | Nyocha
N'otu aka ahụ, dịka onye nwe nyocha a anyị bidoro na Actualidad Gadget kọwara nke ọma, anyị enweela ohere ịnwale ezé ezé ọhụrụ ahụ. Oral-B Genius X 20000N Black Edition na Oral-B n’onwe ya depụtara ya dị ka brọsh ịsa ezé nke nwere ọgụgụ isi.
El Oral-B Genius X doro anya na ọ bụ otu nchacha ezé kacha mma anyị nwere ike ịzụta taa maka ọtụtụ ihe na nke bụ isi bụ na ọ na-ejikọ anyị na iOS ma ọ bụ ngwaọrụ gam akporo iji nye anyị nke ahụ mgbe anyị na-asa ezé. Ọzọkwa mgbe ị na-ajụ gị dọkịta ezé banyere ụdị brushes ọtụtụ mgbe, ha ga-agwa anyị na ha bụ ndị zuru okè allies mbuso gingivitis, nke bụ na-agba ọbara ọgbụgba mgbe anyị na-ete ezé.
Nwere ike nweta brọsh ọnụ gị nke Oral-B Genius X
Anyị anaghị eche ihu ezé ezé nkịtị, ya mere, n'okwu ndị a, anyị na-akwado mgbe niile na na ọkara kwa afọ ma ọ bụ nleta kwa afọ na dọkịta anyị na-ajụ ya ozugbo banyere ohere nke iji ahịhịa eletrik maka ezé anyị. N'ọtụtụ ọnọdụ, dọkịta ezé ga-akwado anyị ya yana iji drọk eze na nyocha ndị kwekọrọ na ya. Mana nke a bụ nsogbu nwere ike ịhapụ ugbu a ma na anyị kwenyere na onye ọ bụla n'ime gị kwesịrị ịkpọ dọkịta ezé gị, n'ọnọdụ m, m na-eji brọsh ezé eletrik kemgbe ọtụtụ afọ na Nke a Oral-B Genius X abụwo ezé ezé m ruo nwa oge.
1 Esemokwu dị iche iche karịa nke ọma na brushes eletrik ndị ọzọ
2 Imewe ihe imewe
3 Oral-B Genius X igbe dị n’ime
4 Ihe ọgụgụ isi nke brush a na-arụ ọrụ
5 Nginggbanwe brushing na ihicha ụdịdị
6 Batrị maka izu abụọ iji ya
Esemokwu dị iche iche karịa nke ọma na brushes eletrik ndị ọzọ
Ihe anyị nwere ike ịhụ na mbụ lee anya bụ na nke a abụghị otu n'ime brushes ndị a - dịka nke m na-ejibu onwe m eme - awade ekwe omume nke ijikọ ya na anyị mobile ngwaọrụ ma hu otutu ihe banyere ichapu anyi. Nke a bụ uru doro anya iji meziwanye nchapu kwa ụbọchị, niile na ekele maka mmemme dị iche iche ọ na-enye na nhọrọ dịnụ.
Na-ekwu na ọ dịghị mkpa iji jikọọ Oral-B Genius X na ngwaọrụ mkpanaka, mana n'ụzọ ezi uche dị na ya mgbe anyị mere anyị nwere ọtụtụ uru karịa ahịhịa Oral-B mgbe niile. Nke a dabere na onye ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ejirila m smartphone (nke a bụ iPhone) na nke m Ihe akara ahụ dị ezigbo mma.
Imewe ihe imewe
Na nke a, dị ka ndị ọzọ nke brushes nke Braun Oral-B firm, atụmatụ ya bụ n'ezie ergonomic na anyị nwere ike ịnụ ụtọ njigide zuru oke maka mkpocha ezé anyị. Ihe ndozi ahụ zuru ụwa ọnụ ka ihe ọ bụla Oral-B ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ n imomi (ọ bụghị na-atụ aro ya n'ọtụtụ ọnọdụ) kwesịrị ekwesị maka nchapu a, ọ dịghị mkpa ịzụta ndị nwere "Midnight Black" rụchaa dị ka nke anyị hụrụ na igbe ngwaahịa.
Plastic na roba bụ isi ihe eji eme ka smart a mara mma ma anyị nwere ike ịkwado gị na ha na-adịgide adịgide. Ọ na-agbakwụnye ihe ikanam n’elu dị n'ihu isi ka anyị wee nwee ike ịhụ nrụgide a na-arụ na ezé ma nyere anyị aka na nrụgide a na-etinye na ezé. N'ezie, ụdị dị iche iche nke brushing anyị hụrụ na akụkụ ahịhịa na-enwu gbaa, na-enye ozi gbasara batrị na njikọ na ama anyị.
Oral-B Genius X igbe dị n’ime
Ihe niile ịchọrọ ịga njem na ahịhịa ebe ọ bụla ọbụlagodi ịhapụ ya n'ụlọ n'enweghị nsogbu na mposi, na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ anaghị akwụ ụgwọ. Ihe dị mma banyere ahịhịa a bụ na ọ na-agbakwunye ihe niile ịchọrọ iji nwee ọ enjoyụ na-ehicha ebe ọ bụla yana mgbanaka ya iji mata isi anyị ma nwee ike ịkekọrịta ahịhịa ahụ na ndị ọzọ. Ọ dị ezigbo ọcha iji nwee ike ịnara Oral-B a mgbe anyị nwere njem ma kesaa ahịhịa ahụ, niile na-ekele igbe igbe nke na-agbakwunye nhọrọ nnabata. Nke a bụ ihe anyị hụrụ n'ime igbe maka Oral-B Genius X 20000N:
Nke mbu bu onu onu Oral-B Genius X
Travelkpụrụ njem Smart ahụ na batrị nke ya
Chaja maka njem njem ojii
Oral-B CrossAction mejupụta
Tebụl gị guzoro iji dozie ihe anọ
Nchaji isi anyị nwere ike itinye na tebụl nkwụnye
Akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ ntuziaka na nkwa nke ahịhịa
A n'ezie zuru ezu ahịhịa na okwu nke ngwa anyị na-ahụ na ohere ọ na-enye iji were ya na anyị na-enweghị na-ata ahụhụ site na ibu, ebe ọ bụ na ya smart ikpe na-agbakwunye a batrị nke ahụ na-enye ohere nke itinye ahịhịa ahụ n'enweghị nsogbu.
Ihe ọgụgụ isi nke brush a na-arụ ọrụ
Ugbu a, mgbe anyị hụrụ ngwa na ndị ọzọ, anyị ga-abanye n'ụzọ zuru ezu na ọrụ nke ọfụma a ma eziokwu bụ na ọ na-atọ ụtọ. Genius X a nwere ikike ọgụgụ isi nke na-amata omume ịcha ahịhịa na nke a na ụbọchị na ọnwa ọ ga-abata dị nfe na imeghari na brushing.
Nrụgide anyị na-etinye na ezé nwere ike ịdị njọ mgbe ụfọdụ ma ọ bụ ebe ahụ ka ọgụgụ isi nke Oral-B na-abanye na mbelata ọsọ nke isi na ọkụ okirikiri (n'akụkụ elu nke ahịhịa) ga-enwu elu na-acha uhie uhie na-adọ anyị aka ná ntị mgbe anyị na-etinye nrụgide dị ukwuu na ezé ma ọ bụ chịngọm. Niile na-agbada ma ọ bụ na-abawanye na spindle ọsọ kpamkpam autonomously. Ya mere, nke a gbakwunyere na ọkwa ntanye ndị ọzọ anyị nwere ga-enyere anyị aka nke ukwuu iji debe ịdị ọcha nke ọnụ anyị.
Nginggbanwe brushing na ihicha ụdịdị
Nke a bụ isiokwu na-adọrọ mmasị dịka anyị nwere usoro 6 na-ehicha: usoro nchacha kwa ụbọchị, nlekọta chịngọm, ọnọdụ dị nro, Pro Clean mode, ọnọdụ ịcha ọcha na nhicha ire. Ndị a ụdịdị na-akpali dabere na ụbọchị na ị ga-enwe nhọrọ nke Njikọ Bluetooth na ama anyị nke na-enyekwu nhọrọ. Njikọ a bụ ihe meghere anyị ụzọ ka anyị wee hụ nnyonye ezé anyị ma lelee, dozie ma hichaa akụkụ ọ bụla nke ọnụ anyị n'uju.
Ikanam nke yiri mgbaaka nke brush tinyeworo ga-agbanwe agba na-acha anụnụ anụnụ maka ihe dịka 30 sekọnd iji gosi mgbanwe nke ebe nhicha. Amamịghe echiche na-amata ụdị ịchacha gị ma na-eduzi anyị n'ụzọ dị mfe iji nweta nsonaazụ kacha mma oge ọ bụla anyị na-ehicha. Obi abụọ adịghị ya na ọ na-akawanye mma ma na-arụpụta ọtụtụ, mana anyị ga-eburịrị n'uche mgbe niile echiche nke dọkịta anyị eze banyere iji brushes ndị a ebe ọ bụ na ejiri ya eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi ha nwere ike ịdị njọ karịa otu brọsh.
Anyị nwere ike ịsị na ngwa Oral-B na-enyere ọtụtụ "geeks" aka ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ dịghị mkpa, ọ nwere ike ịba uru iji ya mee ihe iji debe nsacha anyị. Ngwa maka iOS na gam akporo bụ n'efu ma nye anyi ohere ijikwa nhicha anyị ntakịrị.
Developer: Mmepụta Procter & Gamble
Kporie nnukwu Oral-B Genius X a
Batrị maka izu abụọ iji ya
Batrị lithium-ion na-enye anyị ohere ịha ikikere ezé n’oge ihe dị ka izu abụọ na-agbanyeghị ọkụ ọkụ. Na mgbakwunye, nhọrọ nke ịnwe Smart ikpe maka njem na-enye anyị ohere iwere ezé ezé ebubo, yana batrị ọzọ n'ime ya ma ọ nwere ike ịbụ otu uru dị ukwuu maka ndị anyị na-eji ụdị ngwaọrụ a ezé ezé anyị. .
Tụkwasị na nke ahụ, ikpe njem Smart na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ mkpanaka ekele maka ụdị USB ya A na-agbakwunye n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ. A naghị eji nke a akwụ ụgwọ ikpe ahụ n'onwe ya.
Ekike, ihe eji achọ mma
Ọtụtụ ụdịdị dị maka brush
Njikwa Bluetooth nke ịchacha na nhụcha anya na ngwa ahụ
Ezigbo ahịhịa obodo
Ọ bụghị ọnụ ala dị ọnụ ala mana ọ na-atụ aro ya nke ukwuu
Oral-B Genius X 20000N Agba Mbipụta
Battery obodo kwụụrụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Anyị nwalere Oral-B Genius X 20000N Black Edition, ezé nke ọgụgụ isi
Ekweisi kachasị mma inye na ekeresimesi